Photo: nosipho mkhize IQembu laKwaNyuswa elaziwa ngokuthi yi-Rieaco Bird Media ebeluhlele umcimbi wamaSiko
IQEMBU laKwaNyuswa elaziwa ngokuthi yi-Rieco Bird Media ibe nomcimbi wama Siko lapho bekukhangiswa ngoNobuhle nama Geza asemphakathini lo mcimbi obunesiqubulo esithi uNobuhle neGeza ubuse zinkundleni zemidlalo KwaNyuswa.
Kubonakale umphakathi ufika ngobuningi bawo uzothamela lo mcimbi obuhlanganise izinhlanga ezahlukene.
“Lo mcimbi unike amalungu omphakathi ithuba lokuthi bagubhe amasiko ahlukahlukene . Labo abebe ngenele lo mncintiswano wonobuhle nama geza bebe lindeleke ukuba begqoke izingubo zesintu futhi amajaji akhethe loyo obashaye emakhanda. “Kwabe silisa kuwine uSfundo ‘Lah’ Ngcobo obe yigeza lo nyaka kwabesifazane kwa wina uLondeka ‘Sandla Sengcweti’ Zondi obe nguNobuhle womcimbi ka-2016.”
UNzama uthe iqembu lenza konke okuse mandleni ukuthi liqhakambise amathalente akhona emphakathini: “Kukona konke esikwenzayo ekuqhakambiseni amathalente emphakathini asifuni ukukhohlwa iSiko lethu. Lokhu asikwenzanga kuphela ngokuthi kugqokwe imvunulo kodwa sikwenze nangoku ziphatha, inhlonipho nango mlando wesintu. Lo mcimbi ungomunye wemicimbi edonse amehlo eningi KwaNyuswa futhi umehluko siyawubona kwezobuCiko namaSiko. I-Rieco Bird Media ingezinye zezinhlangano ezaziwayo KwaNyuswa futhi isizenzele igama elihle emphakathini njengoba ilekelela intsha enamathalente ahlukene iphinde ilekelele labo abanama khono ahlukene. Okubalulekile wukuthi sifuna ukushintsha izimpilo zabantu abasha emphakathini.
KWABE SILISA KUWINE USFUNDO ‘LAH’ NGCOBO OBE KWABESIFAZANE KWA WINA ULONDEKA ‘SANDLA SENGCWETI’ ZONDI. KONA KONKE ESIKWENZAYO EKUQHAKAMBISENI AMATHALENTE EMPHAKATHINI ASIFUNI UKUKHOHLWA ISIKO LETHU